Manakiana ny fiainana maoderina miaraka amin'ny minimalism sy mena avy amin'i Ingravalle | Famoronana an-tserasera
Miaraka amin'ny rehetra ilay fiainana niomerika izay niditra an-tsokosoko isan'andro, avela hisokatra ny varavarana noho ny fitsikerana azy ary haneho amin'ny fomba hafa izay hiaingantsika amin'ny hazakazaka.
Es Sergio Ingravalle izay mampiseho izany amin'ny fomba mihantsy miaraka amina andiam-panazavana izay mahatonga ireo fotoana izay ahitantsika ny tenantsika miaraka amin'ny fifanoheran-kevitra na toy ny zombie voafatotra amin'ny efijery mazava be fotsiny isika.
Fanampin'ny asa na fahalianana isaky ny segondra ho an'ny zavatra navoakan'ny hafa amin'ny tambajotra sosialy, mamadika antsika ho karazana olombelona hafa. Ingravalle dia afaka manazava ireo fotoana ireo amin'ny fomba fijery hafa.
Miaraka amin'ny fomba minimalista, Ireto fanoharana ireto dia mamerina indray mandala ny andro izay ahalalantsika ny maha-olona antsika ary lasa saika fari-kaody fotsiny isika. Fiteny iray izay manazava ny fahitana mahatalanjona izay manova ny lohantsika ho tranom-borona.
Ese fanomezana peratra fampakaram-bady izay lasa lakilen'ny «Escape». Ny "Tsia" izay tondra-drano amin'ny ankamaroan'ny andro raha misento kosa ny vava. Ny tsy fitovian-kevitra momba ny tsy fahalalana hoe aiza no andehanantsika rehefa mizotra mankany amin'ny lohasahanay isika.
Ny lalao fitantanana ny soatoavin'ny tsenam-bola amin'ny herinaratra, na ny fomba hahatongavan'ny fandriantsika manokana sary tonga lafatra mba hampisehoana ny fifandraisana tsy misy tariby, indrindra amin'ny làlana mankany amin'ny nofy.
Sary maromaro izay mifandraika amin'ny fotoana isan'andro iainantsika rehetra ankehitriny. Sergio Ingravalle mampiasa loko telo ny ankamaroany: fotsy, mainty sy mena. Ity farany izay natanjaka indrindra naneho ny herisetra nitranga.
Avelanay ianao ny instagramny Facebookny tranonkala ary ny rohy mankany amina mpanakanto hafa izay hainy koa ny mamely ny saina tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo sary manaitra ny fiainana maoderina nataon'i Sergio Ingravalle